Inqaku leRedmi 8 liza kusebenzisa iSnapdragon 665 njengeprosesa | I-Androidsis
Sele isaziwa ukuba yeyiphi inkqubo eza kusetyenziswa yiRedmi Qaphela 8
Inqaku leRedmi 8 kunye nohlobo lwayo lwePro ziifowuni ezimbini esikhangele phambili kuzo ngomdla omkhulu. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo umhla wokufayilwa wachazwa ngokusesikweni yodidi olutsha lwaphakathi lwegama lesiTshayina. Ukongeza, kwezi ntsuku sifumene ukuvuza kokuqala malunga neemodeli ezimbini. Phakathi kwabo siye sakwazi yazi iprosesa yemodeli yePro.
Kwakukho amathandabuzo malunga nokuba yeyiphi na inkqubo eyayiza kusetyenziswa yiRedmi Qaphela 8. Njengoko Imodeli yePro iza kufika ngeHelio G90T, eyi-chip eyenzelwe umdlalo ophakathi kwinqanaba lokudlala. Ke ngoko, bekucingelwa ukuba imodeli eqhelekileyo iyakusebenzisa iprosesa yeMediaTek, kodwa kubonakala ngathi ayizukuyenza.
Kutyhilwe ukuba iya kuba yi-Snapdragon 665 iprosesa esiya kuyifumana kwiRedmi Qaphela 8. Ezi veki bekuhlala kucingelwa ukuba le iya kuba yiprosesa ekhethiweyo. Enye yezona zinto zaziwa kakhulu phakathi kuluhlu lweemarike, ngenxa yoko ayothusi into evela kuhlobo lwaseTshayina.
Uphawu lwaseTshayina selusebenzise le chip ngaphambili. Njengoko iXiaomi Mi A3 inayo le processor ngaphakathi. Ke iyenza icace ngale ndlela ukuba sijongane nefowuni efikelela kwinqanaba eliphakathi. Iprosesa esebenza kakuhle kweli candelo lentengiso.
Ke ngoko, enye yezona nkcukacha zibalulekileyo malunga neRedmi Qaphela 8 ityhilwe ngale ndlela. Kule veki iphelileyo bekukho iindaba ezininzi malunga neefowuni ezimbini. Kubekho impikiswano enkulu malunga neekhamera, njengoko kulindelwe enye yeemodeli ezimbini Sebenzisa inzwa ye-MP eyi-64, owokuqala kwimarike ukwenza njalo.
Ukulinda kufutshane ngokwaneleyo sele. NgoLwesine, nge-29 ka-Agasti, izakwaziswa ngokusemthethweni le Inqaku leRedmi kunye neNqaku le-8 Pro. Nangona ukubona iziphumo ezilungileyo Kwisizukulwana esidlulileyo, ngokuqinisekileyo yimpumelelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Sele isaziwa ukuba yeyiphi inkqubo eza kusetyenziswa yiRedmi Qaphela 8
Imifanekiso emitsha evuzayo yeNokia 7.2
Zonke ezi ziifowuni, ukuza kuthi ga ngoku, eziza kufumana i-Android Q